Ungawukhuphela njani umculo kuYouTube ovela kuGoogle? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungawukhuphela njani umculo kuYouTube kuGoogle?
Meyi 1, 2021 0 IiCententarios 271
YouTube Elinye lawona maphepha ewebhu atyelelweyo kwihlabathi liphela namhlanje, njengoko ineebhiliyoni zotyelelo lwemihla ngemihla kwaye owona mxholo uphandwayo ufikelela kwizigidi zeembono ngemizuzu nje, ngenxa yoko sithetha ngento enentsholongwane.
Uninzi lwabasebenzisi abaqhelekileyo ukwenza iqonga le-Intanethi Babhenela koku ikakhulu ngenxa yokwahluka komculo ekubonelelayo, kuba ayisiyonyani into yokuba isizinda sinolona hlobo lomculo lubalaseleyo kwi-intanethi.
Iipesenti ezingama-93 zabasebenzisi be YouTubeNgokwezifundo ezahlukeneyo zokuziphatha kwi-Intanethi, umamela umculo kuphela kwiphepha kwaye olu hlobo lwevidiyo luthandwa kakhulu.
Ndingawukhuphela umculo kwiYouTube ngaphandle kwengxaki?
Nangona kungekho semthethweni ngokupheleleyo, ukuba unokukhuphela umculo kwi le nethiwekhi yoluntu ngaphandle kwendleko kwaye inomgangatho owamkelekileyo ongaphaya, owenza lo ngowona mthombo uphambili kubo bonke abo bakhuphela iingoma kubaculi ababathandayo yonke imihla.
Kuphando olwenziwe nge-intanethi, abasebenzisi abohlukeneyo baqinisekisa ukuba i-84% yexesha, bangena kuphela YouTube ukukhangela ingoma ethile, abayikhupheleyo xa befumana ukukhangela, ke sinokucinga ukuba lo ngumsebenzi ongaphezulu kokuqhelekileyo.
Ukukhuphela umculo kuhlala kulula kakhulu, kuba kufuneka sibe nekhonkco levidiyo. Kukho amaphepha aliqela kwiwebhu kwaye kuya kufuneka ufake isikhangeli sakho osithandayo kwaye ubhale: "khuphela iividiyo YouTube", Amakhulu okhetho aya kuboniswa apho kwaye uya kuba nakho ukukhetha eyona ifanele wena.
La maphepha anenkqubo ekuvumela ukuba ukhangele ikhonkco le iqonga lewebhu kwaye uyihlelele yona kwifomathi oyifunayo, phakathi kweluhlu lwezinto onokukhetha kuzo, phakathi kweMP3, MP4, WAV, phakathi kwezinye, ezimeleyo.
Kukho ezinye izicelo zasimahla ngokupheleleyo apho kuya kufuneka ukhangele igama lengoma ofuna ukuyikhuphela okanye igcisa kwaye oku kuya kubonisa uthotho lwezinto onokuzenza, ngokungathi ubungaphakathi ukusuka kumxholo omkhulu weaudiyo.
Iinkcukacha ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhuphela umculo kwiYouTube
Ngelixa usenza olu hlobo lokukhutshelwa Ilula kakhulu, kukho izinto ezithile ekufuneka zithathelwe ingqalelo ukuze kungabikho xesha lingathandekiyo.
Umculo ovela YouTube Kufuneka isetyenziselwe wena kuphela, njengoko kungekho semthethweni ukuyisebenzisela ezinye iinjongo.
Ukuba ufuna ukusebenzisa umculo Ngenjongo enengeniso, kufuneka uqiniseke ukuba ayinamalungelo obunini okanye awunamalungelo okushicilela, kuba oku kufuneka wazise injini yokukhangela yoku.
Kuya kufuneka ulumke ngentengiso kunye neentengiso ze amaphepha okhuphelo ohlukeneyo okanye usetyenziso, Ewe ngamanye amaxesha kunokuvulwa ngaphandle kwemvume yakho kwaye konakalise isixhobo sakho.
Abanye usetyenziso okanye imimandla yewebhu Mahala unenkqubo ekuvumela kuphela ukuba ukhuphele inani elithile leefayile ngosuku okanye ngeyure, ke kuya kufuneka uyazi le nto.
1 Ndingawukhuphela umculo kwiYouTube ngaphandle kwengxaki?
2 Khuphela kwi-YouTube
3 Iinkcukacha ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhuphela umculo kwiYouTube
Ungawukhuphela njani umculo kwiYouTube ukuya kwiPC?